Kuboshwe uthisha osolwa ngokutalabha umfundi ngepayipi | Eyethu News
Twitter reviewing its rules to better protect victims of sexual harassment - 4 hours ago
Kuboshwe uthisha osolwa ngokutalabha umfundi ngepayipi
“Uboshelwe emagcekeni esikole kubukwa.”
Ushaqwe amaphoyisa uthisha waseThembimzamo Primary School eseManzini abaliyo enyakatho nedolobha laseMnambithi. Lothisha usolwa ngokutaxa umfundi ngepayipi phambi kwabanye abafundi.
Ngokusho komthombo we-Eyethu ongathandanga ukudalulwa, uthe lothisha walandwa amaphoyisa esemagcekeni esikole. Lesisigameko senzeka ngosuku lwezithandani (14 February), kodwa luze lwafika manje kwabezindaba ngenxa yokuthi oncinze i-Eyethu uthi loludaba belushayelwa phansi bengafuni abaphathi besikole luphumele ngaphandle.
Uthi lomthombo umndeni womfundi owashaywa uvuke indlobane, kwaba yima abaphathi besikole beluveza loludaba. Nakuba kungacaci kahle okwaba yimbangela eyadala ukushaywa kwalomfundi ngepayiphi, kodwa umthombo ukhale ngesihluku sikathisha kuloludaba. “Uthisha wakhombisa unya oluyinqaba ngenkathi eshaya lomfundi. Yingakho abazali bengane banquma ukulanda amaphoyisa bavulela lothisha icala lokushaya ingane yabo,” kusho lomthombo.
Kuthintwa uMnuz Muzi Mahlambi okukhulumela uMnyango wezeMfundo lapha esifundazweni, uthe umnyango ngeke ukubekezelele ukushaywa kwabafundi beshaywa othisha. “ Kudala SIbakhuza othisha ukuthi abahlukane nokushaya abafundi, ngoba induku kudala yavalwa ezikoleni.”
Okhulumela amaphoyisa eMnambithi uCaptain Charmaine Struwig usiqinisekisile isigameko.
“Kuboshwe owesifazane oneminyaka enga-52 ubudala, esolwa ngokutalabha intombazane ngepayipayi,” kusho okhulumela amaphoyisa aseMnambithi.
Uthe amaphoyisa asaqhubeka nophenyo lwawo kuloludaba.
Lizonandisa eThekwini iqembu lomculo laphesheya
I-Theku nezinhlelo zokunciphisa izinhlekelele
UNdunankulu uxwayise ngesiphepho esisengafika
Iphuma NgoLwesihlanu I-Albhamu Ye-Distruction Boyz
Abafundi bajikijele amaphoyisa ngendle nomchamo kwaboshwa 18 eMgungundlovu
Utholwe eshonile owesifazane obelahlekile
Ikhansela lithi sekuphele unyaka lingenalo i-ofisi
‘Umfowethu omncane wadlwengula indodakazi yami’
Uboshelwe ‘ukugqekeza ebe’ kubo
Bawu-50 abafake isicelo somsebenzi wokulengisa iziboshwa eziwu-92 eZimbabwe
Kufunwa olahlekile eMnambithi